Tag: hargeyso | Sagal Radio Services
Dhagayso:Madaxweynaha Maamulka Somaliland oo eedeynaya Dowlada Federalka
Madaxweynaha Maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta dib ugu laabtay magaalada Hargeysa ayaa waxaa uu eedeyn kulul u jeediyay Dowlada Federalka isagoo ku eedeeyay go’ankii Dowladda Soomaaliya ay xiriirka ugu jartay dowladda Gini xilli uu safar ku joogay dalkaas.
Somaliland oo sheegtay inay maxkamada saari doonto ciidamadii ka goostay ee ku biirey Puntland
Sagal Radio Services • News Report • June 1, 2019
Wasiirka Gaashaandhiga Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye ayaa sheegay inuu maxkamada ciidamada saari doonaan saraakiil ka goostay ciidamda Somaliland oo ku biirey Puntland, waxaanu xusay in aanay dib dambe u dhici doonin ciidamo kolba dhinac u carara.
Ciidanka Amniga Somaliland oo xalay goor dambe gurigiisa kala baxay Wadaad ka caan ah Hargeysa
Sagal Radio Services • News Report • September 6, 2017
Ciidamada amniga Somaliland ayaa xalay hawlgal ay sameeyeen ku soo qabtay Sheekh Aadan Cabdiraxmaan Warsame (Aadan Sunne) oo lagu eedeeyey inuu ku kacay falal amniga ka dhan ah.
Baarlamaanka Somaliland oo doortay guddoomiye cusub
Sagal Radio Services • News Report • August 6, 2017
Xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta kalfadhi ku yeeshay magaalada Hargeysa waxaa ay guddoomiye u doorteen Baashe Maxamed Faarax oo isu soo taagay tartanka doorashada.
Madaxweyne Siilaanyo oo ka qaybgalay daahfurka sahaminta shidaalka ka socda gobolada Bariga
Sagal Radio Services • News Report • March 26, 2017
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo safar shaqo ku jooga goboladda bariga ayaa saaka hiirtii waabari socdaal ku maray deegaanadda laga wado sahaminta Shiidaalka iyo macdanta ee Togdheer, ka dibna dib usu soo laabtay magaaladda Burco oo uu kaga qaybgalayey daah furka bilowga sahaminta shiidaalka oo maalmahan ka socday goboladda qaar.
Waraabe”Gobolka Sh Hoose Dagaalka ka socda waxay meel ku dhac ku tahay Xasan Sheikh
Sagal Radio Services • News Report • June 11, 2014
Faysal Cali Waraabe Gudoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah Ee UCID oo Isagoo ku sugan Magaalada Hargeysa ayaa waxaa uu ka hadlay dagaalka ka socday Dhawaanahaanba Gobolka Sh Hoose waxaana uu dagaalkaas ku tilmaamay mid Nasiib Xumo u ah Dowladda uu Hogaamiyo Madaxweyne Xasan Sheikh.
Qaraxyo xalay mar kale ka dhacay magaalada Hargeysa
Sagal Radio Services • News Report • June 2, 2014
Qaraxyo xoogan ayaa xalay mar kale ka dhacay magaalada Hargeysa ee Maamulka Somaliland, iyadoo xiisada siyaasadeed ee ka taagan uu cirka isku sii shareerayo.
Dadweynaha Hargeysa oo Cambaareeyey xariga Qaar ka mid ah Fanaaniinta
Sagal Radio Services • News Report • April 11, 2014
Ciidamadda Amniga Somaliland ayaa madaarka Hargeysa ku xidhay dhawr maalmood ka hor gudoomiyihii Fanaaniinta Xidigaha geeska iyo Fanaanad Ikraan Jaamac oo safar gaaban kaga soo noqday magaaladda Muqdisho.
Feysal C. Waraabe "Xasan Sheekh hadaa Khaatumo aqoonsatay, anaga Marka ayaa aqoonsaneynaa"
Sagal Radio Services • News Report • January 26, 2014
Gudoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ee UCID Feysal Cali Waraabe ayaa si kulul uga jawaabay hadalo ka soo yeeray Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa in hadii dadka reer Khaatumo tashteen, maamulna sameystaan ay aqoonsanayaan.